Ivotoerana data | Mamo Power Technology Co., Ltd.
Amin'ny maha-famatsiana herinaratra backup lehibe dia be mpampiasa ao amin'ny ivon-data. Raha misy tsy fahampian'ny herinaratra tampoka dia mety ho malemy ny orinasa iray manontolo. Minitra vitsy amin'ny minitra dia mety hiteraka fatiantoka ara-toekarena goavambe. Orinasa e-varotra lehibe no mitarika ny fahitana vahaolana amin'ity olana lehibe ity: ahoana no ahafahantsika manome antoka fa ny famatsiana angovo azo itokisana dia tsy mametraka ny habetsaky ny angon-drakitra ilain'izy ireo hanaovana ny asany.
Tsy mahagaga noho izany fa ireo orinasam-barotra e-varotra manerantany dia sahirana nanao fitaovam-piadiana mahery vaika mba hananan'izy ireo fanampiana vonjy taitra izay mety tsy hamela azy ireo amin'ny fifaninanana amin'ny karazana tsy fahombiazan'ny tambajotra, tsy miankina amin'ny halaviran'ny toy izany Mety hisy fotoana hafa koa. Tsy maintsy mitohy ny herinaratra!
MAMO POWER dia manana siansa fampiharana an-tany izay mametraka fepetra takiana amin'ny lehibe sy azo itokisana. Ireo milina fandrehitra Mamo dia manana fahaiza-mitantana am-pitiavana, naneho fahaiza-manao hahazoana fahazoana zato isan-jato, ary ny statistikan'ny mpanjifa fototra dia afaka miala sasatra azo antoka fa mividy rafitra teknolojia herinaratra miaraka amin'ny lafiny lehibe amin'ny fahamendrehana sy ny fahamendrehana. Ity ny volan'ny orinasa Mamo notazonina.